SEKRETERA JENERALIN’NY ONU : “Mila miray hina izao tontolo izao hiatrehana izay krizy miseho”
Nifantoka betsaka tamin’ny fanarenana ny ho avin’izao tontolo izao mba hananan’ny Firenena tsirairay avy fanantenana indray ny hafatra noentin’ny sekretera jeneralin’ny vondron’ny Firenena mikambana. 7 janvier 2021
Hampitsiry fanantenana vaovao ity taona 2021 ity, raha ny voalazany.
Maizina ho an’izao tontolo izao iny taona 2020 nivalona iny. Firenena maro no nitanondrika manoloana ny fandravaravana noentin’ny valanaretina Covid-19. An’hetsiny maro ireo olona namoy ny ainy maneran-tany. Tsy vitan’izany fa niteraka voka-dratsy tsy mety tafarina mandraka ankehitriny ity tsimokaretina ity.
Hatreto, Firenena maro no mbola latsaka anaty fahasahiranana tanteraka noho ireo takaitra navelan’ny Coronavirus teo amin’ny lafiny ara-tsôsialy, indrindra ny lafiny ara-ekônômika. Nisy ny hafatra avy amin’ny sekretera jeneralin’ny Firenena mikambana amin’izao fahatongavan’ny taona vaovao izao. Nambarany fa raha sedra mafy no nandalovan’ny Firenena maro maneran-tany tamin’iny taona 2020 iny, dia hisy tsirim-panantenana vaovao kosa amin’ity taona ity. Na dia teo aza ny valanaretina izay nandripaka olona maro dia tsy nikely soroka tamin’ny fitadiavana izay vahaolana ihany koa ireo manam-pahaizana isan-tokony. “Nanatsoahana lesona ny taona 2020, taonan’ny sedra sy ny alahelo ary ny ranomaso. Nanakorontana fiainana sy nampangirifiry an’izao tontolo izao ny valanaretina Covid-19. Hafatra ampitaina amin’izao taona vaovao izao. Maro ireo namoy ny ainy, mitombo isa ny mahantra ny noana, miavosa ny trosa, tsy misy ny asa ary misedra olana ny ankizy. Mahazo vahana ny herisetra sy ny tsy fandriam-pahalemana maneran-tany saingy tonga ity ny taona vaovao hitondra tsirim-panantenana. Manolo-tanana amin’ny mpiray monina aminy ny zanak’olombelona. Manome ny tsara indrindra avy any aminy ireo mpiasa mandray an-tanana ny ady amin’ny valanaretina. Mamokatra vaksiny ao anatina fotoana faran’izay fohy ny mpikaroka, mandray andraikitra hisorohana ny vokatry ny loza voajanahary ny isam-pirenena”, araka ny voarakitra ao amin’ilay hafatra.
Mila hamafisina ny fiaraha-miasa sy firaisan-kina
Nohamafisin’ity sekretera jeneraly eo anivon’ny Firenena mikambana ity fa ilaina hoentina hanatratrarana ny fiovana maneran-tany ny fiaraha-miasa, fifanampiana ary firaisan-kina eo amin’izao tontolo izao. Nahafahana naka lesona ny zava-drehetra niseho tamin’iny taona nivalona iny, raha ny nambarany hatrany. Mbola tsy resy ny valanaretina Covid-19 saingy tsy afa-miala amin’ny vokatra ateraky ny fiovaovan’ny toetr’andro ihany koa izao tontolo izao.
Eo anatrehan’izany indrindra no ilaina ny fifanohanan’ny Firenena tsirairay. “Raha miara-miasa sy miray hina izao tontolo izao dia hanazava sy hitondra fiovana maneran-tany ny tsirim-panantenana. Izany no lesona tsoahina manoloana ny zava-misy iainana amin’izao fotoana, tsy maintsy mamondrona hery ny rehetra hiatrehana ny krizy ateraky ny fiovan’ny toetr’andro sy ny fihanaky ny Covid-19, hoy hatrany izy.
Nambarany fa tanjon’ny Firenena mikambana amin’izao taona 2021 izao dia ny hananganana fiombonam-be maneran-tany hampifandanjana ny fifohana rivotra madio sy ny famoahana entona maloto hatramin’ny taona 2050. Hametraka ihany koa ny filaminana eo amin’ny samy olona an-kilany ary eo amin’ny olona sy ny zavaboary an-daniny.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1995) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (909) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (205) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (110) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (93) 2 mars 2021